Mpamatsy milina zezika Granulator mpanafika Granulator mora vidy tsy misy fanamainana mora vidy | YiZheng
Inona no atao hoe Gran Extrusion Fertilizer Granulator?
ny Roll Extrusion Compound Fertilizer Granulator milina dia masinina granulation tsy misy maina ary fitaovana granulation tsy misy fanamainana somary mandroso. Izy io dia manana tombony amin'ny haitao mandroso, famolavolana antonony, firafitra mifototra, zava-baovao ary ilaina amin'ny fampiasana angovo ambany. Izy io dia afaka manohana ireo fitaovana mifandraika amin'izany, mamorona tsipika famokarana kely hahatratra ny fahaiza-manao maharitra amin'ny famokarana mekanika.
Fitsipika momba ny asa amin'ny Gran Extrusion
Ny Granulator zezika an-tsokosoko Roll Extrusion ny masinina dia an'ny maodelin'ny slip extrusion, mampiasa teknolojia mihosin-tany maina izy io mba hanaparitahana ireo akora vovoka ho poti-javatra. Ny lozisialy fanontam-pirinty maina dia miankina amin'ny fomban'ny tsindry ivelany hanerena ireo fitaovana mandalo ny elanelana misy eo anelanelan'ny rojom-panodinana roa hanery ho sombiny. Mandritra ny fizotran'ny fihodinana, ny hakitroky ny sombintsombiny dia azo ampitomboina 1.5 ~ in-3 mba hahatratrarana ny fitakiana tanjaka sombiny sasany. Ny tahan'ny granulation an'ity milina ity dia avo, be mpampiasa amin'ny famatrarana zezika mitambatra, fanafody, indostrian'ny simika, famahanana, arina, metalyurgy ary akora hafa, ary afaka mamokatra karazan-tsakafo maro karazana, anisan'izany ny zezika biolojika, zezika tsy biolojika, zezika biolojika, zezika andriamby, sns.) zezika mitambatra.
Fa maninona no misafidy us masinina Granulator zezika mpiorina?
Natokana hanome anay ny ozininay fitaovana fambolena voajanahary sy zezika serivisy teknolojia ho an'ireo mpampiasa, ao anatin'izany ny volavola firafitra ankapobeny ho an'ny vokatra isan-taona 1-100.000 taonina tsy misy fitaovana fanamainana, ny famokarana andiany feno fitarihana ara-teknika, fanirahana, rehetra ao anaty serivisy iray.
Amin'izao fotoana izao, aorian'ny fivoaran'ny traikefa efa an-taonany maro amin'ny famokarana fitaovana milina fitrandrahana zezika marobe, ny fitaovan'ny fitaovana manohitra fanoherana harafesina avo lenta, fanamboarana am-pitandremana, dia manana tombony amin'ny endrika tsara tarehy, fandidiana tsotra, fanjifana angovo kely, androm-piainana lava, tahan'ny varimbazaha avo lenta, ny milina granule zezika ao an-toerana mandroso, vokatra manerana ny firenena, ity granulator andiany ity dia azo ampiharina amin'ny faritra maro.
Tombony amin'ny masinina Granulator zezika mpiorina Extrusion
1. Raha tsy misy additives, vovoka maina dia granulated mivantana.
2. Ny tanjaky ny granular dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny tsindry roller, fifehezana ny tanjaky ny vokatra farany.
3. Fandehanana tsingerina hahatratrarana famokarana mitohy.
4. Ny fitaovana dia voatery manery ny famolavolana amin'ny tsindry mekanika, tsy misy additives, azo antoka ny fahadiovan'ny vokatra.
5. Ny vovoka maina dia voaangona mivantana tsy misy fanamainana fanaraha-maso, ny fizotran'ny famokarana efa misy dia mora mifangaro sy manova.
6. Ny tanjaky ny granular dia avo, raha oharina amin'ny fomba hafa granulate, ny fanatsarana ny hakitroky malefaka dia manan-danja, indrindra ho an'ny fotoana izay mampitombo ny ampahany amin'ny fanangonam-bokatra.
7. Azo ampiasaina amin'ny granulate ny akora maro karazana, ny herin'ny granular dia azo ovaina malalaka arakaraka ny fitaovana samihafa.
8. Firafitra mifehy, fikojakojana mora, fandidiana tsotra, dingana fohy, fanjifana angovo ambany, fahombiazana avo lenta, tahan'ny tsy fahombiazan'ny ambany.
9. Hifehy ny fandotoana ny tontolo iainana, hampihena ny vidin'ny fonosana sy ny vovoka ary hanatsara ny fahafahan'ny fitaterana vokatra.
10. Ireo singa fampitaovana lehibe dia mampiasa fitaovana firaka avo lenta. Vy vy, titanium, chromium ary alika hafa ambonimbony izay nanatsara fatratra ny fanoherana, ny fanoherana ny harafesina, ny hafanana avo lenta ary ny fahaizan'ny tsindry, ka ity servisy ity dia manana androm-piainana maharitra.
Topimaso iray momba ny tsipika famokarana zezika fitambaran-java-boaloboka tsy misy fanamainana roa
YiZheng Heavy Machines Co., LTD dia afaka manome ny famolavolana ny fizotrany ary manome ny rafitra WHOLE amin'ny famokarana zezika mitambatra.
izany Tsy misy fanamainana Double Roller Extrusion Compound Fertilizer Granulation Production Line afaka mamokatra zezika mitambatra avo sy salantsalany ary ambany ho an'ny voly isan-karazany. Miaraka amin'ny granulator avo roa heny hamokarana ireo granules, ny tsipika famokarana dia tsy mila dingana fanamainana, manana fampiasam-bola kely sy fanjifana herinaratra ambany. Ny horonan-tsarimihetsika fanaovan-gazety an'ny granulator dia azo natao hanamboarana endrika sy habe samihafa amin'ny fitaovana. Ny tsipika dia misy milina famonoana mandeha ho azy, mpanelanelana amin'ny fehikibo, mpampifangaro vilany, mpana feeder, granulator extrusion, milina fitiliana rotary, trano fitahirizana vokatra vita ary milina fanangonana mandeha ho azy. Vonona izahay hanolotra ireo fitaovana zezika azo antoka indrindra sy ireo vahaolana mety indrindra ho an'ireo mpanjifantsika mendri-kaja.
Tsy misy fanamainana Double Roller Extrusion Compound Fertilizer Granulation Production Line Fikorianam-pandehanana ：
Fitaovam-pitaovana (milina fametahana statika) → Fangaro (Mixer disc) → Granulate (granulator extrusion) → Screening (Masinina fitiliana amponga Rotary) → Fitaovana (milina fanosotra amponga Rotary) → Fonosana vita vita (fonosana mandeha ho azy) → fitehirizana (fitehirizana toerana mangatsiaka sy maina)
NAOTY: ity tsipika famokarana ity dia ho anao ihany.
Fampisehoana horonantsary Granulator fampiroboroboana horonantsary Extrusion
Fidio ny modely fividianana zezika Granulator
Fahafahana （t / h）
Suhu amin'ny efitrano
Diamètre vakitra (mm)
6-20N (hery mamotika)
Teo aloha: Milina Composting Turner mandeha ho azy
Manaraka: Granulator zezika biolojika karazana vaovao
Fampidirana Inona no masinina mixeur BB-pupuk? Ny masinina mpametaka zezika BB dia fitaovana fampidirana amin'ny alàlan'ny rafi-pamokarana sakafo, miakatra sy midina ny fitoeran-tsakafo mba hamahanana ireo fitaovana, izay alefa mivantana ao anaty mixer, ary ilay mixeur an'ny zezika BB amin'ny alàlan'ny mekanisma anatiny manokana sy rafitra telo-telo miavaka ...